Facebook အကောင့်ပိတ်လိုက်တာနဲ့ အကောင့်ဖျက်တာက ဘာကွာခြားလဲ??? - For her Myanmar
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Facebook ကို ပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်
ယောင်းတို့ရေ.. Facebook သုံးစွဲရတာလည်း တစ်ခါတလေ ပျော်ဖို့ကောင်းပေမဲ့ တစ်ခါတလေကျပြန်တော့လည်း ပျင်းရိငြီးငွေ့လာလို့ ဆက်မသုံးချင်တော့တာမျိုးတွေ ကြုံဖူးကြတယ်ဟုတ်… Facebook ကိုလုံးဝ မသုံးချင်တော့ဘူးဆိုရင် အကောင့်ကိုဖျက်လို့ရပြီး ခဏတာမသုံးချင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ အကောင့်ကိုခဏတာ ပိတ်ထားလို့ရပါတယ်။ ဒီတော့ မင်မင်ကနေ Facebook ကို ဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ … ဘယ်လိုဖျက်ရမလဲဆိုတာတွေကို ယောင်းတို့အတွက် ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်နော်…..
Deactivating ဆိုတာကတော့ အကောင့်ကို ခဏပိတ်ထားတာဖြစ်လို့ လိုချင်တဲ့အချိန် ပြန်ရယူလို့ရပါတယ်။ Search Bar မှာ ယောင်းတို့နာမည် ရိုက်ရှာမယ်ဆိုရင် ယောင်းတို့ကိုတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ယောင်းတို့ကို Tag တွဲထားတာတွေလည်း အလိုလိုပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အကောင့်ပြန်ရယူတဲ့အချိန်မှာတော့ ယောင်းတို့နောက်ဆုံး သုံးထားခဲ့တဲ့အတိုင်း နေသားတကျ ပြန်လည်ရရှိနိုင်မှာပါ….
Deleting account ဆိုတာကတော့ Facebook အကောင့်ကို လုံးဝဖျက်ပစ်လိုက်တာပါ။ အပြီးဖျက်လိုက်တာဖြစ်လို့ ပြန်ရယူလို့မရတော့ပါဘူး။ အကောင့်ဖျက်ချင်ရင်တော့ ရက် ၉၀ စောင့်ရပါတယ်။ အဲ့ဒီအတောအတွင်း စိတ်ပြောင်းသွားလို့ မဖျက်ချင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ ပြန်ပြီးငြင်းလို့ရပါတယ်။ ရက် ၉၀ အတွင်းမှာတော့ ယောင်းတို့ ရဲ့အချက်အလက်တွေကို သုံးခွင့်ရတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူးနော်။
Related article>>> Facebook ကို အန္တရာယ်ကင်းကင်း အသုံးပြုနိုင်အောင် Security မြှင့်ပြီး သုံးကြမယ်။
Deactivate ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ setting > your facebook information > Account Ownership and Control > Deactivation and Delection > Deactivate Account ကိုရွေးချယ်ပေးပါ။
Deactivate ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ယောင်းတို့ကို အကြောင်းပြချက်တွေ တောင်းပါလိမ့်မယ်..
အပေါ်ဆုံးက This is temporary . I ‘ ll be back ဆိုတာလေးကို ရွေးချယ်ပေးပါ။ ရွေးချယ်ပြီး အောက်မှာပြထားသလို Box လေးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ Log Out လုပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် ယောင်းတို့ Facebook account ပိတ်သွားပါပြီ။ ပြန်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ပုံမှန်သုံးနေကျအတိုင်း Log in ဝင်လိုက်တာနဲ့ နဂိုမူလအတိုင်း ပြန်သုံးလို့ရနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်..
Delete Account လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ setting > your facebook information > Account Ownership and Control >Deactivation and Delection >Delete account ကိုရွေးလိုက်ရင်ရပါပြီ။
Related Article >>> Facebook ကြီးသာမရှိတော့ရင်….
ယောင်းတို့ရေ… Facebook deacative လုပ်နည်းနဲ့ Deleting Account လုပ်နည်းတွေကို ဝေမျှပေးပြီးပြီဆိုတော့ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် Facebook ကိုပိတ်ချင် ၊ ဖျက်ချင်တဲ့ အခါမျိုးတွေမှာ မခက်ခဲတော့ဘူးပေါ့… နောက်ထပ်လည်း ယောင်းတို့အတွက် ဗဟုသုတရရှိစေမယ့် အကြောင်းအရာတွေကို ဝေမျှပေးဦးမှာမို့ For Her Myanmar Page ကို Like & See First လုပ်ထားကြပါဦးနော်….
အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ Facebook ကို ပိတျခငျြတယျဆိုရငျ
ယောငျးတို့ရေ.. Facebook သုံးစှဲရတာလညျး တဈခါတလေ ပြျောဖို့ကောငျးပမေဲ့ တဈခါတလကေပြွနျတော့လညျး ပငျြးရိငွီးငှလေ့ာလို့ ဆကျမသုံးခငျြတော့တာမြိုးတှေ ကွုံဖူးကွတယျဟုတျ… Facebook ကိုလုံးဝ မသုံးခငျြတော့ဘူးဆိုရငျ အကောငျ့ကိုဖကျြလို့ရပွီး ခဏတာမသုံးခငျြတော့ဘူးဆိုရငျတော့ အကောငျ့ကိုခဏတာ ပိတျထားလို့ရပါတယျ။ ဒီတော့ မငျမငျကနေ Facebook ကို ဘယျလိုပိတျရမလဲ … ဘယျလိုဖကျြရမလဲဆိုတာတှကေို ယောငျးတို့အတှကျ ဝမြှေပေးခငျြပါတယျနျော…..
Deactivating ဆိုတာကတော့ အကောငျ့ကို ခဏပိတျထားတာဖွဈလို့ လိုခငျြတဲ့အခြိနျ ပွနျရယူလို့ရပါတယျ။ Search Bar မှာ ယောငျးတို့နာမညျ ရိုကျရှာမယျဆိုရငျ ယောငျးတို့ကိုတှရေ့မှာမဟုတျပါဘူး။ ယောငျးတို့ကို Tag တှဲထားတာတှလေညျး အလိုလိုပြောကျသှားမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အကောငျ့ပွနျရယူတဲ့အခြိနျမှာတော့ ယောငျးတို့နောကျဆုံး သုံးထားခဲ့တဲ့အတိုငျး နသေားတကြ ပွနျလညျရရှိနိုငျမှာပါ….
Deleting account ဆိုတာကတော့ Facebook အကောငျ့ကို လုံးဝဖကျြပဈလိုကျတာပါ။ အပွီးဖကျြလိုကျတာဖွဈလို့ ပွနျရယူလို့မရတော့ပါဘူး။ အကောငျ့ဖကျြခငျြရငျတော့ ရကျ ၉၀ စောငျ့ရပါတယျ။ အဲ့ဒီအတောအတှငျး စိတျပွောငျးသှားလို့ မဖကျြခငျြတော့ဘူးဆိုရငျတော့ ပွနျပွီးငွငျးလို့ရပါတယျ။ ရကျ ၉၀ အတှငျးမှာတော့ ယောငျးတို့ ရဲ့အခကျြအလကျတှကေို သုံးခှငျ့ရတော့မှာ မဟုတျပါဘူးနျော။
Related article>>> Facebook ကို အန်တရာယျကငျးကငျး အသုံးပွုနိုငျအောငျ Security မွှငျ့ပွီး သုံးကွမယျ။
Deactivate ဘယျလိုလုပျရမလဲဆိုတော့ setting > your facebook information > Account Ownership and Control > Deactivation and Delection > Deactivate Account ကိုရှေးခယျြပေးပါ။
Deactivate ကိုနှိပျလိုကျတဲ့အခါမှာတော့ ယောငျးတို့ကို အကွောငျးပွခကျြတှေ တောငျးပါလိမျ့မယျ..
အပျေါဆုံးက This is temporary . I ‘ ll be back ဆိုတာလေးကို ရှေးခယျြပေးပါ။ ရှေးခယျြပွီး အောကျမှာပွထားသလို Box လေးပျေါလာပွီဆိုရငျတော့ Log Out လုပျလိုကျပါ။ ဒါဆိုရငျ ယောငျးတို့ Facebook account ပိတျသှားပါပွီ။ ပွနျသုံးမယျဆိုရငျတော့ ပုံမှနျသုံးနကေအြတိုငျး Log in ဝငျလိုကျတာနဲ့ နဂိုမူလအတိုငျး ပွနျသုံးလို့ရနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ..
Delete Account လုပျမယျဆိုရငျတော့ setting > your facebook information > Account Ownership and Control >Deactivation and Delection >Delect account ကိုရှေးလိုကျရငျရပါပွီ။
Related Article >>> Facebook ကွီးသာမရှိတော့ရငျ….
ယောငျးတို့ရေ… Facebook deacative လုပျနညျးနဲ့ Deleting Account လုပျနညျးတှကေို ဝမြှေပေးပွီးပွီဆိုတော့ အကွောငျးကွောငျးကွောငျ့ Facebook ကိုပိတျခငျြ ၊ ဖကျြခငျြတဲ့ အခါမြိုးတှမှော မခကျခဲတော့ဘူးပေါ့… နောကျထပျလညျး ယောငျးတို့အတှကျ ဗဟုသုတရရှိစမေယျ့ အကွောငျးအရာတှကေို ဝမြှေပေးဦးမှာမို့ For Her Myanmar Page ကို Like & See First လုပျထားကွပါဦးနျော….
Tags: account, deactivating, deleting, difference, Facebook
Stella April 2, 2019
ရိုးရိုးခင်တတ်တဲ့လူနဲ့ အီစီကလီလုပ်တတ်တဲ့လူကြားက ကွာခြားချက်
Hnin Ei Oo February 1, 2019
အံ့သြလောက်တဲ့ Messenger ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် (၅) ခု
Sugar Cane January 25, 2019